France popular Bulelani kubakhenkethi hotspot ngokwemizi yalo entle neebhakana ezidume. Eli lizwe liphupha indawo ekuyiwa kuyo odumileyo wonke umhlaba ukuze inkcubeko yayo ubukhalipha ukutya okumnandi. Ngexa abakhenkethi ezininzi umhlambi ku Paris, isixeko amaninzi sixinane kakhulu, ikakhulu ihlobo. Ngethamsanqa, France uye lukhulu ukuba anikele nje Paris kwaye uhlole ezintlanu sezixeko ngaphantsi ephithizelayo ngezantsi.
Kwabo banomdla bokwakha, Lyon kanjalo ekhaya a inani Renaissance amabandla ukuba uza kufumana asasazwa zonke phezu isixeko.
Ukuba unomdla amakha, Grasse nguye oya ogqibeleleyo. Wakuba Ndiye ndazibonela ezolileyo yayo, ngephambili izitrato, uya kufumana wena ufuna ukubuyela kwakhona. Grasse i indawo ezintle ibekwe ecaleni French Riviera kunye, eyona ndlela ibhetele ahlabe bakule apha ukwenza French wakho! !
Famous ngokuba isixeko yesibini ngobukhulu France, Marseille sisixeko kunye kwimozulu yaselunxwemeni umxhelo. nawe Apha uza kufumana amabhodlo hambo, amazing namaziko ezobugcisa kukushiya ababenalo iiyure. Kwabo bafuna kuthanjiswa, Marseille likhaya esimhlophe mihle apho kuqubha ulwandle ezimnandi. Marseille inika eyona omabini njengoko izaliswe imisebenzi yenkcubeko kwakunye kwiindawo serene ukuba ukhombe.
Ngokufuthi ingqalelo enye zixeko underrated yaseFransi, Lille ngaphantsi abaninzi ngaphezu ezinye French endaweni ethandwa kakhulu kodwa ngokulinganayo enhle. abakhenkethi nga chu ngokusebenzisa iindlela ngokubhijela onwabele nakubugcisa inemibala kwaye ezixinene emoyeni apha endleleni. Ukuze abathandi art, i Palace of Arts Fine museum yindawo kunyanzelekile-utyelelo njengoko likhaya ingqokelela yemizobo yesibini ngobukhulu yaseFransi.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-less-crowded-cities-to-explore-in-france/- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#champagne #grasse #marseille #traveleurope encane Lyon travelfrance